Akhriso: Taariikh nololeedkii AUN Sheekh Aadan Cali Xasan oo saakay lagu aasay degmada Kaxda – XAMAR POST
Allaha u naxariistee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa saakay lagu aasay Marxuum Sheekh Aadan Cali Xasan oo ka tirsanaa bahda Radio Muqdisho, Sheekha ayaa mudo dheer Raadiyaha Qaranka umadda Soomaliyeed uga soo gudbi jiray barnaamijyo wacyi-gelin ah iyo duruus diini ah.
Sanadkii 1943-kii ayuu Sheekh Aadan Cali Xasan ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Allaha u naxariistee Sheekh Aadan Cali Xasan waxa uu aad u bartay diinta Islaamka, waxuuna Radio Muqdisho ku soo biiray sanadkii 1963-kii, isagoo ka baahi jiray duruus diini ah iyo barnaamijyo wacyi-gelin ah oo aad loogu tixnaa.
Sheekh Aadan waxa uu aad ugu hadli jiray luuqadaha Soomaaliga iyo Carabiga, waxuuna dalal badan oo ay ugu horeyso Masar u tegay barashada Diinta Islaamka.
Madaxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, gaar ahaan wasiir Cusmaan Abuukar Dubbe iyo Agaasimaha Radio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelkii iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Sheekh Aadan Cali Xasan.
WASIIRKA HAWEYNKA OO LA KULANTAY XUBNO KA TIRSAN QARAMADA MIDOOBE